Ogaden News Agency (ONA) – Shirkii Guddiga Fulinta JWXO oo lagu go’aansaday qodobo muhiim ah
Shirkii Guddiga Fulinta JWXO oo lagu go’aansaday qodobo muhiim ah
Posted by ONA Admin	/ December 1, 2013
Shirkii Guddiga fulinta JWXO ee caadiga ahaa ayaa qabsoomay 1/12/2013, kaasoo ku soo hagaagay dhamaadka sanadkan la sagootiyahayo iyo u diyaargarow sanadka soo foodleh, islamarkaan ku soo beegmay marxaladan uu marahayo halganka gobanimodoonka shacbiga Somalida Ogadeniya ee xaq u dirirka. Waxaa ka mid ahaa qodobada sida aadka loo falanqeeyay xalaada uu ku sugan yahay shacbiga Ogadenia ee cadawgu weetaynao. Sidoo kale waxaa la falanqeeyay dhacdooyinka saamaynta leh halganka ee ka socda gobolkan Geeska Afrika, waxaana si gaar ah looga faalooday hogga madaw ee uu ku jiro gumaysiga madaw ee Itoobiya kadib kaligii talihyihii dhiigyo-cab ee Meles Zinawi.
Guddigu wuxuu isla qiray guula halganka shacab Ogadeniya uu ku tallaabsaday Sanadkan dabayaaqada ah. Guulahan oo leh, dhanka CWXO, Abaabulka shacbiga iyo tallaabooyinka diblomaasiga ee JWXO horey u qaaday, kuwaas oo midho dhalkoodu muuqdo.
Dhanka Gobolka G/Afrika wuxuu Guddiga Fulinta tilmaamay goáano ku habboona ka qaatay dhacdooyinka saamaynta ku leh halganka Ogadenia iyo nolosha dadweynah guud ahaan sida loola fagalahayo si ku qotonta danta halganka iyo dadweynahaba.
Waxaa hoosta laga xariiqay jiritaanka isbadalo raadreeb leh oo ka dhacay aduunweynaha oo maalinba maalinta ka dambeysa sii noqonaya mid isku xidhan si toos ah iyo dedbanba.
Goluhu wuxuu qaatay goáano ku habboon marxalada isbadala wajiyada badan ee ka socda dunida iyo gobolka G/Afrika oo maraya xaalad kala guur, gaar ahaan burburka gumaysiga Itoobiya hadheeyay iyo soo gaabashada cimrigii Kooxda TPLF, ee ku amar ku taalaynaysay dadyowga ku hoos dulman taliskeeda guracan.Dood dheer iyo lafagur cilmiyeysan kadib, goluhu wuxuu qaatay goáanadan:
1- In la xoojiyo waxqabadka abaabul ee gudaha iyo hawlgalada qorshaysan ee CWXO lana dhamstiro staatiiyada gudaha ee lagu dejiyey Kal-fadhigii 6aad ee GDH ee jabhada.
2- In si gaar loo xoojiyo qodobadii sitraatijadu lagu xusay ee ku aadanaa dhanka, Ciidanka, Abaabulka, Diblomaasiyada iyo Iskaashiga xoogaga xaq u dirirka ahee ka soo horjeeda taliska TPLF.
3- In la Xoojiyo iskaashjaiga Mucaaradka, Jabhaddaha gobanimodoonka ah iyo ururada xaq u dirirka ah ee halganka kula jira Talis Adisababa.
4- In loogu halgamo si buuxda in caalamku ogaado xaqiiqda khadhaadh ee ka jirta dal Ogadeniaya iyo Gumaadka uu taliska TPLF ku hayo shacbiga birimagayadada ah ee Ogadenia, lana horkeeno maxkamad caalami ah gacanku dhiigleyaasha gaystay falalka gaboodfalka
Guddiga fulinta Jwxo wuxuu ugu baaqayaa shacbiga ogadenia inay israaciyaan gumaysigu gabalkiisu dhacay ee Itoobiya oo ku jira rafashadii ugu dambaysay, islamarkaana ay labanlaabaan waxqabadkoodii halgan ee dhanwalba lehaa, si guushu u soo degdegto.
s.c.w Ogadenia ha xorowdo ayaan leenahay gumeysiguna ha jabo gaalaraacyaduna boos ha waayaan by Gundiid